Ogaden News Agency (ONA) – Rabshada Qorshaysan oo ka Bilowday Dirdhabe
Rabshada Qorshaysan oo ka Bilowday Dirdhabe
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Dirdhabe ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya inuu ka bilowday dagaal gacanta laysula tagay oo u dhaxeeyay shacabka Oromada iyo shacabka S.Ogadenia ee dagan magaalada Dirdhabe. Dagaalkan oo sii xumaanaya ayaa lasheegayaa in kicintiisa iyo hurintiisaba ay ka danbeeyaan kooxda wadanka ka arimisa ee TPLF. Dadka arimaha Itobiya u dhuun-duleela ayaa sheegaya in arintan ay noqon karto jawaabta ay ka bixiyeen Kooxda TPLF banaanbaxyada ay sida wadajirka ah uga dhigayaan dalalka caalamka.
Sida warku sheegayo dagaaladan ayaa salka kuhaya kadib markay koosda TPLF dagmo caan ah oo gobolka Oromada kutaalay kudareen ismaamulka adis ababa sidaasna ay kaga baxda gacanta qoomiyada Oromada wararka ayaa tibaaxaya in ay shacabka Oromia bilaabeen kacdoon balaadhan oo ay kaga soo horjeedaan magaalada laga wareejiyay waxa loo yaqaano kilalka Oromia waxayna kacdoonadu u badnaayeen jaamacadaha kala ah ESP universaty Ambo universaty iyo jaamacada caanka ah ee haramanyo. Kacdoonkan ay ardaydu hor muudka ka ahaayeen oo aad u gilgilay guud ahaan wadanka loo yaqaano Ethiopia ayay ciidamada gumaysigu kala hortageen gacan bir ah waxayna laayeen arday badan qaar kalana waxay kuxidheen xabsiyada ay ciqaabta usamaysteen.
Dhanka kale ciidanka Itoobiya ayaa lawareegay guud ahaan jaamacada Ambo universaty oo kutaala gobolka Oromada waxayna u badaleen xero ciidan.
Intaas kadib shacabka Oromada oo aad ugadoodsan ayaa bilaabay in ay weeraraan cid kasta oo aan ku hadlaynin afka Oromada iyagoo wax yeeleeyay arday badan oo ay Soomaali kujirto, waxaana bilowday in shacabkii Oromada iyo soomaalida ee wada daganaa magaalada Dirdhabe laysu mariyo oo ay gacanta isula tagaan iyadoo ay ciidanka amaanku sheeda ka daawanayaan waxaana lasheegayaa in uu maalinkii 3aad marayo dagaalka labada qoomiyadood ee mudada badan kuwada daganaa nabada mana jiro cid kukala dhax jirta.
Dhanka kale waxaan wali istaagin mudaharaadadii ay wadeen shacabka Oromada gaar ahaan ardayda jaamacadaha oo iyagu ooxasuusanaya dhibaatooyin badan oo loo gaystay
ardayda qoomiyada Oromada iyo guud ahaan ardayda muslimiinta. Mudo yar kahor unbay ahayd markii la sumeeyay ardayda muslimiinta ah ee dhigata jaamacada ugu wayn guud ahaan wadanka Itoobiya ee Haramanyo waxaana la sheegay in qaybta muslimiinta wax loogu kariyo lagu shubay sun kolkaasoo Isbitaalada ay buuxiyeen ardaydii sunta ku waxyeelowday, meesha qaybta wax loogu kariyo ardayda aan muslimiinta ahayn aanay cidna ku sumoobin.
Sikastaba ha ahaatee waxaan la ogayn meesha ay ku danbayn doonaan mudaharaadyada rabshadaha wata ee ay wado qoomiyada Oromada iyo dagaalkan u danbeeya ee u dhaxeeya shacabka Soomaalida iyo kuwa Oromada ee wada daga Dirdhabe.